[Official Trailer] NOT ME เขา...ไม่ใช่ผม | ais myanmar - Presal.net
Home » [Official Trailer] NOT ME เขา…ไม่ใช่ผม | ais myanmar
[Official Trailer] NOT ME เขา…ไม่ใช่ผม | ais myanmar
AIS Myanmar မဂၤလာပါထိုင္းလန္း EP.3
Assoc Prof Htwe Htwe Thein on the ‘silent strike’ against Myanmar’s military govt
AIS Myanmar မှ ကြည်နူး ပျော်ရွှင် လွမ်းဆွတ်စေမည့် အစီအစဉ် “ လွမ်းဆွတ်မိတဲ့မြန်မာပြည် “
Aung San Suu Kyi – Nhân Vật Chính Trị Nổi Tiếng Nhất Myanmar
See also สินเชื่อยัวร์แคช aeon ไม่ต้องใช้สบิปเงินเดือน อนุมัตไวภายใน30นาที | อิ ออ น ผ่อน โทรศัพท์ ซัม ซุง
ေငြအနည္းငယ္ႏွင့္ေရွာ့ပင္းထြက္လို႔ရမည့္ေနရာေလးပါ ယေန႔ က်က္ထိုူက်ေစ်းကို ေခၚသြားေပးမယ္
AIS Myanmar မဂၤလာပါထိုင္းလန္း EP.3 : ႏွင့္အတူ JJ Market ကို ေရွာ့ပင္းထြက္ၾကမယ္
သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ Like ႏွင့္ Share ၿပီး ေျပာေပးလိုက္ပါဦး ေရွ႕လေတြမွာလည္း ဘယ္ေနရာေတြသြားၾကဦးမလဲဆိုတာ သိခ်င္ရင္ ဒီဗီဒီအိုေလးေအာက္က Subscribe ကို ႏွိပ္ဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ… ေရွဆက္ၿပီး ဗီဒီအိုေလးေတြၾကည့္ရေအာင္
🙏 အရင္ဗီဒီအို AIS Myanmar မဂၤလာပါထိုင္းလန္း EP.2 ဘိုးဘိုးႀကီးဆီမွာသြားဆုေတာင္းၾကမယ္
⭐️ အရင္ဗီဒီအို AIS Myanmar မဂၤလာပါထိုင္းလန္း EP.1 အမ္ဖာဝါေစ်းကို သြားလည္ၾကမယ္
https://www.youtube.com/watch?v=JvklQsRbK00\_u0026list=PLdjP9GAU30E1U7W2PDjswb2nUjWGnJD6R\_u0026index=7 (ZawGyi Font)
ငွေအနည်းငယ်နှင့်ရှော့ပင်းထွက်လို့ရမည့်နေရာလေးပါ ယနေ့ ကျက်ထိုူကျစျေးကို ခေါ်သွားပေးမယ်
AIS Myanmar မင်္ဂလာပါထိုင်းလန်း EP.3 : နှင့်အတူ JJ Market ကို ရှော့ပင်းထွက်ကြမယ်
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Like နှင့် Share ပြီး ပြောပေးလိုက်ပါဦး ရှေ့လတွေမှာလည်း ဘယ်နေရာတွေသွားကြဦးမလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ဒီဗီဒီအိုလေးအောက်က Subscribe ကို နှိပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော… ရှေဆက်ပြီး ဗီဒီအိုလေးတွေကြည့်ရအောင်
🙏 အရင်ဗီဒီအို AIS Myanmar မင်္ဂလာပါထိုင်းလန်း EP.2 ဘိုးဘိုးကြီးဆီမှာသွားဆုတောင်းကြမယ်
⭐️ အရင်ဗီဒီအို AIS Myanmar မင်္ဂလာပါထိုင်းလန်း EP.1 အမ်ဖာဝါစျေးကို သွားလည်ကြမယ်
https://www.youtube.com/watch?v=JvklQsRbK00\_u0026list=PLdjP9GAU30E1U7W2PDjswb2nUjWGnJD6R\_u0026index=7 (Unicode Font)
See also รีวิว mPay App บริการรับชำระบิล เติมเงินขั้นเทพที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ AIS! | ซื้อ 3g เพิ่ม ais
Across Myanmar, businesses have shut and people are staying home as part ofa\_”silent protest\_” against military rule. Soldiers have been accused of killing 11 civilians and burning their bodies this week. The UN and US have condemned the attacks on civilians. Dr Htew Htew Thein from Curtin University shared her thoughts on the situation in Myanmar and US Secretary of State Antony Blinken’s visit to Southeast Asia next week.
လြမ္းတာေတြ ေျပေပ်ာက္သြားဖို႔ ေပ်ာ္စရာေတြ ရရွိဖို႔ ေႏြးေထြးမႈေတြ ခံစားရဖို႔ “ လြမ္းဆြတ္မိတဲ့ျမန္မာျပည္ “ အစီအစဥ္ ေလးကို ခ်စ္ရတဲ့သူမ်ားအတြက္ ရွဲလ္ၿပီး ေျပာျပေပးလိုက္ပါ
13 ဒီဇင္ဘာလ 2020 ဝက္ဒ္ေကသုမ္ေစ်း
20 ဒီဇင္ဘာလ 2020 ဖက္ကဆင္ 91ေစ်း
25 ဒီဇင္ဘာလ 2020 ဝက္ဒ္ခေလာင္ခ႐ူေစ်း
သတင္းေကာင္းေတြ ဆုလက္ေဆာင္ေတြ ေပ်ာ္စရာအစီအစဥ္ေတြ လိုခ်င္လ်င္ေတာ့ AIS Myanmar ေပ့ခ်္ကို Like လုပ္ေပးထားဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ
မဂၤလာျမန္မာဆင္းမ္ ႏွင့္ 5G လိုင္းအျပည့္ဆုံး အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး အေကာင္းဆုံး
AISMyanmarFest AISMyanmar AISMyanmarThailand
လွမ်းတာတွေ ပြေပျောက်သွားဖို့ ပျော်စရာတွေ ရရှိဖို့ နွေးထွေးမှုတွေ ခံစားရဖို့ “ လွမ်းဆွတ်မိတဲ့မြန်မာပြည် “ အစီအစဉ် လေးကို ချစ်ရတဲ့သူများအတွက် ရှဲလ်ပြီး ပြောပြပေးလိုက်ပါ
13 ဒီဇင်ဘာလ 2020 ဝက်ဒ်ကေသုမ်စျေး
20 ဒီဇင်ဘာလ 2020 ဖက်ကဆင် 91စျေး
25 ဒီဇင်ဘာလ 2020 ဝက်ဒ်ခလောင်ခရူစျေး
သတင်းကောင်းတွေ ဆုလက်ဆောင်တွေ ပျော်စရာအစီအစဉ်တွေ လိုချင်လျင်တော့ AIS Myanmar ပေ့ချ်ကို Like လုပ်ပေးထားဖို့ မမေ့နဲ့နော
မင်္ဂလာမြန်မာဆင်းမ် နှင့် 5G လိုင်းအပြည့်ဆုံး အကျယ်ပြန့်ဆုံး အကောင်းဆုံး
See also3ขั้นตอนให้ Apple Watch Series5แบตอึดโครต #EP.4 | แอปเปิ้ลวอช 3
Aung San Suu Kyi Nhân Vật Chính Trị Nổi Tiếng Nhất Myanmar
Sáng 1/2/2021, cả thế giới dồn sự chú ý vào chính biến ở Myanmar khi nhà lãnh đạo nổi tiếng Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint cùng nhiều quan chức dân sự bị bắt giữ, khơi mào cho cuộc đảo chính có quy mô ở đất nước này. Cuộc đảo chính đã đáng chú ý, nhưng nhân vật liên quan đến cuộc đảo chính bà Aung San Suu Kyi còn đáng chú hơn. Người phụ nữ này là được xem là “đứng trên tổng thống” khi nắm giữ vị trí cố vấn quốc gia, có thành tích hoạt động chính trị đáng nể và được ca ngợi là nhân vật chính trị nổi tiếng nhất Myanmar.
Nguồn: zingnews.vn, openedu.vn, tuoitre.vn, vtc.vn